TSC oo macallimiinta dalka ku amartay in ay qaataan tallaalka COVID19 | Star FM
Home Wararka Kenya TSC oo macallimiinta dalka ku amartay in ay qaataan tallaalka COVID19
TSC oo macallimiinta dalka ku amartay in ay qaataan tallaalka COVID19
Guddiga adeegga macallimiinta dalka ee TSC ayaa barayaasha aan weli qaadan daawooyinka tallaalka ee ka dhanka ah cudurka COVID19 u qabtay muddo toddobo cisho ah oo ay fursaddan kaga faa’iidaysanayaan.
Madaxa fulinta ee TSC ayaa sheegtay in marka ay mudadan dhammaado tallaabo sharciyeed laga qaadi doono macallimiinta aan amarkan u hoggaansamin.
Guddiga ayaa muujiyay inuunan ku faraxsanayn sida hooseysa ee ay barayaasha ugu soo baxayaan in xanuunka looga tallaalo in kastoo ay dowladdu siinayso mudnaanta koowaad.
Ilaa iyo hadda waxaa tallaalka COVID19 qaatay keliya boqolkiiba 33 ee macallimiinta wadanka.
Tani iyo markii caabuqa corona uu soo gaaray Kenya bishii saddexaad ee sanadkii hore waxaa uu xanuunkan saameeyay 549 oo barayaal ah iyadoo ay u dhinteen 81 tiradan ka mid ah.
Hasa ahaate ururka macallimiinta ee KUPPET ayaa in barayaasha sidii la rabay aynan u qaadanayn tallaalka u aaneeyay wakhtiga oo ciriiri ah.
Dhanka kale waxay maalmo kooban naga xigaan wakhtigii kama dambeyska ahaa ee madaxa waaxda adeegga dadweynaha Joseph Kinyua uu u qabtay shaqaalaha dowladda inay ku qaataan tallaalka COVID19 ka hor 23-ka bishan siddeedaad.
Previous articleDHAGEYSO:Wasiirka arrimaha gudaha oo loogu baaqay inuu isku shaandheyn ku sameeyo ciidamada booliska Kajiado